လွမ်းမပြေ သုတရပ်ဝန်း: February 2012
Tuesday, February 28, 2012 ထွေရာလေးပါး
Wednesday, February 22, 2012 ထွေရာလေးပါး
၀ိုင်အရက် ၄၉၀ လီတာရှိတဲ့ သြစတေးလျနိုင်ငံက ဂင်းနစ်မှတ်တမ်းဝင် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ၀ိုင်(Wine)ပုလင်းကြီး...
Sunday, February 19, 2012 ထူးဆန်းထွေလာ
Sunday, February 19, 2012 ရယ်ရွှင်ဖွယ်ရာ
Sunday, February 19, 2012 အနုပညာလက်ရာ
Sunday, February 19, 2012 စက်မှုရေးရာ
Friday, February 17, 2012 ထွေရာလေးပါး
Thursday, February 16, 2012 ထူးဆန်းထွေလာ
Thursday, February 16, 2012 ရယ်ရွှင်ဖွယ်ရာ
Thursday, February 16, 2012 ထွေရာလေးပါး
Wednesday, February 15, 2012 ထွေရာလေးပါး
ထူးဆန်း USB များ....
Wednesday, February 15, 2012 နည်းပညာသတင်းနှင့် ဖတ်စရာများ
Monday, February 13, 2012 ထွေရာလေးပါး
Friday, February 10, 2012 ထွေရာလေးပါး
Wednesday, February 08, 2012 ထွေရာလေးပါး
အံ့ဖွယ် ကလေး ၁၁ ယောက်မွေးတဲ့ အိန္ဒိယက အမျိုးသမီး....?
Wednesday, February 08, 2012 ထူးဆန်းထွေလာ
ဒီပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်သူမှ အတည်ပြုချက်မပေးနိုင်သေးပါဘူး.... ထွက်နေတဲ့ ကောလဟလတွေ ကတော့... ဒီကလေးတွေဟာ ၁၁ ရက် ၁၁ လ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ သက်ဆိုင်ရာ မိခင်အသီးသီက မွေးဖွားတဲ့ ကလေး ၁၁ ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်.... ဒီလိုတိုက်ဆိုင်မှုဖြစ်နေ တာဟာ ထူးခြားနေတဲ့ အတွက်ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ ကောလဟလတစ်ခုပါ... ပြီးတော့ အဲဒီကလေးတွေထဲက ၆ ယောက် ဟာ အမွှာပူးမွေးထားတာလို့လည်း ဆိုပါတယ်... ဒီကလေး ၁၁ ယောက်လုံးကို သာမန်လူသား
Tuesday, February 07, 2012 ထွေရာလေးပါး
ဘီယာ၊ အချိုရည် သံဗူးတွေနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ အနုပညာ....
Tuesday, February 07, 2012 အနုပညာလက်ရာ
Tuesday, February 07, 2012 ထူးဆန်းထွေလာ
Tuesday, February 07, 2012 ဖတ်စရာ၊ မှတ်စရာ
နယူးယောက်က ၇၆ ပေရှည်တဲ့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ခဲတံ..........
Where's my car........?
Monday, February 06, 2012 ကျန်းမာရေးနှင့် ဆေးပညာ | ထူးဆန်းထွေလာ
အသက်(၅၂)နှစ်အရွယ် ပေါ်တူဂီက Jose ဆိုသူဖြစ်ပါတယ်... ထူးဆန်းရောဂါတစ်မျိုးကြောင့် အသားပိုတွေဟာ မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးကို ဖုံးအုပ်နေပြီး... အရေးပေါ်ခွဲစိတ်ကုသမှုတွေ မလုပ်ရင်တော့ အသက်ရှုပိတ်ပြီး သေဆုံးနိုင်တဲ့ အန္တာရာယ်ရှိပါတယ်... အဲဒီအသားပိုတွေကြောင့်ပဲ မျက်လုံးတစ်ဖက် လည်း ကွယ်နေပါပြီ... ဒီရောဂါဟာ သူ့ရဲ့အသက်(၁၁)နှစ်မှာ စတင်ခဲ့ပြီး... အသက်(၁၆)နှစ်လောက်မှာ စတင်ကြီးထွားလာတာပါ... အဲဒီနောက် တနေ့တခြား ပိုပြီးကြီးလာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်....။
ကျန်းမာရေးနှင့် ဆေးပညာ, ထူးဆန်းထွေလာ,
Monday, February 06, 2012 ထွေရာလေးပါး
Monday, February 06, 2012 ထူးဆန်းထွေလာ
Monday, February 06, 2012 အနုပညာလက်ရာ
Monday, February 06, 2012 ရယ်ရွှင်ဖွယ်ရာ
Poor Katy Perry....
Poor Lady Gaga....
The most beautiful thing we've rarely seen....
Monday, February 06, 2012 ဖတ်စရာ၊ မှတ်စရာ
ပလက်စတစ်ရုပ်ထုငယ် ၁၈၀,၀၀၀ နဲ့ ပင့်မြှောက်ထားတဲ့ မှန်သားကြမ်းပြင်...
Saturday, February 04, 2012 ထူးဆန်းထွေလာ | အနုပညာလက်ရာ
Saturday, February 04, 2012 ထွေရာလေးပါး
Guys Vs. Girls.....
Saturday, February 04, 2012 အနုပညာလက်ရာ
ပဲရစ်က စွန့်ပစ် CDs အချပ်ပေါင်း ၆၅,၀၀၀ နဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ရေလှိုင်းပုံ အနုပညာလက်ရာ...
Saturday, February 04, 2012 ထူးဆန်းထွေလာ
ဒီစားသောက်ဆိုင်ကတော့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ Quezon ခရိုင်မှာ တည်ရှိပါတယ်... ထူးထူးခြားခြား ရေတံ ခွန်အောက်ခြေမှာ တည်ဆောက်ထားတာမို့ အစားလည်းစားရင်း ရေလည်းကစားရင်း အတော့်ကို အဆင်ပြေပါတယ်... ၀ါသနာပါတယ်ဆိုရင်တော့ ရေထဲမှာ တကိုယ်လုံးစိမ်လို့လဲ ရပါတယ်...။
Friday, February 03, 2012 ရယ်ရွှင်ဖွယ်ရာ
Friday, February 03, 2012 ထူးဆန်းထွေလာ | အနုပညာလက်ရာ
Friday, February 03, 2012 ထူးဆန်းထွေလာ
Real life of Tom & Jerry-3
Friday, February 03, 2012 ရယ်ရွှင်ဖွယ်ရာ | ထွေရာလေးပါး
Friday, February 03, 2012 ထွေရာလေးပါး
၀ိုင်အရက် ၄၉၀ လီတာရှိတဲ့ သြစတေးလျနိုင်ငံက ဂင်းနစ်မ...
အံ့ဖွယ် ကလေး ၁၁ ယောက်မွေးတဲ့ အိန္ဒိယက အမျိုးသမီး......
ပလက်စတစ်ရုပ်ထုငယ် ၁၈၀,၀၀၀ နဲ့ ပင့်မြှောက်ထားတဲ့ မှ...
ပဲရစ်က စွန့်ပစ် CDs အချပ်ပေါင်း ၆၅,၀၀၀ နဲ့ ပြုလုပ်...
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်က အသုံးပြုခဲ့တဲ့ B-25 အမျိုးအစား လေယာဥ...
ပုလင်းပေါ်မှာ ဒိုက်ထိုးတဲ့ (၇)နှစ်သား.....
အိပ်ချိန်မရအောင် အလုပ်များနေသော နိုင်ငံရေးသမားများ...
ကား Accidents များ....
မင်္ဂလာစုံတွဲပေါင်း (၇၀၀)ပါဝင်တဲ့ Armenia က ကမ္ဘာ့အကြ...
ဂျပန်နိုင်ငံက ထုတ်လုပ်တဲ့ အမျိုးသားများအတွက် ခေါင်...
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး ဟော်တယ်ပျံ....ဟော်တယ်လီကော်ပတာ (Hotel...